MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardဩဂုတ် 2016 - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Month: ဩဂုတ် 2016
ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုအချို့ကြောင့် သက်ရောက်ခံခဲ့့ရသည့် သုံးစွဲသူများအား MPT မှ ဖုန်းငွေပြန်ဖြည့်ပေးမည်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) ၏ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ရယူထားခြင်းမရှိသော ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ဝန်ဆောင်ခများ ပေးဆောင်နေရကြောင်း MPT မှ သိရှိခဲ့ကာ ယင်းအတွက်အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကိစ္စရပ်ကြောင့် သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့သော သုံးစွဲသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက် သင့်လျော်သည့်အချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်း ဖုန်းငွေများ ပြန်လည် ဖြည့်သွင်းပေးသွားမည့်အကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ဖုန်းငွေ ပြန်လည် ဖြည့်သွင်းပေးမည့်အစီအစဉ်ကို သတင်းထုတ်ပြန်သည့် နေ့မှစတင်၍လုပ်ဆောင် ပေးသွားမည် ဖြစ်ကာ ငါးရက်မှ ခြောက်ရက်အထိ ကြာမြင့် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
MPT သုံးစွဲသူများအတွက် ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများ ပေးခြင်းကို အခြားသောပြင်ပမှ တတိယ အဖွဲ့အစည်းများက ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ထိုသို့ ဖြစ်ရသည်ဆိုသည်ကို သေချာစွာ သိရှိနားလည်နိုင်ရန် နှင့် ထပ်မံ၍ အဆင်မပြေမှုများဖြစ်ပွားမှု မရှိစေရန် လတ်တလောတွင် MPT အနေဖြင့် မိမိတို့ ဌာနအတွင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
ယခုဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်နေသည်ကို သိရှိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် MPT သုံးစွဲသူများအား မထိခိုက်စေရန်အတွက် သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ကျသင့်ခနှုန်းထားများ ကောက်ခံခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး ၊ MPT မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်း အားလုံးသော တတိယအဖွဲ့ အစည်းမျာမှ ပေးအပ်လျက်ရှိသည့် ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကို အသစ်ရယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီးလည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခွင့် မပြုခဲ့ပါ။ ထိုအချိန်မှစတင်ကာ ယခုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ခြင်းမရှိဟု အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည့် ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုသာ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုခဲ့ပါသည်။
MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ယင်းဖြစ်ရပ်တွင် မိမိတို့သက်ရောက်ခြင်း ရှိ မရှိနှင့် ဖုန်းငွေ ပြန်လည် ဖြည့်သွင်းပေးမှုကို ရရှိမည့်သူများ အနေဖြင့်လည်း ဖုန်းငွေပြန်လည် ဖြည့်သွင်းပေးမှုကို အတည်ပြုနိုင်ရန် အတွက် MPT ၏ “လိုတရ” ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
http://lotayamm.com မှတစ်ဆင့် လိုတရ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို သွားပါ။ သတိပြုရန်မှာ မိမိတို့စနစ်မှ သုံးစွဲသူအနေဖြင့် သက်ရောက်မှုခံရသူ ဟုတ်မဟုတ် ကို အတည်ပြုရန် အတွက် MPT ၏ 3G Network ကို အသုံးပြုပြီးသာ ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲသူအနေဖြင့် ငွေဖြည့်သွင်း ခြင်းခံရခြင်း ရှိမရှိကို စစ်ဆေးရန် ဝင်ရောက်ခြင်းအတွက် မည်သည့် အင်တာနက် အသုံးပြုခမျှ ကျသင့်မည် မဟုတ်ပါ။.
ဝက်ဘ်ဆိုက် မူလစာမျက်နှာ၏ အပေါ်ဘက် Search Box ၏ အောက်တည့်တည်တွင် “သတင်း အချက်အလက်နှင့် ဖျော်ဖြေရေး ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ငွေပြန်ဖြည့်သွင်းပေးခြင်းဆိုင်ရာ” ဆိုသည့် link ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်း link သို့ဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အချက်အလက်များကို ရှင်းပြထားသည့် စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်လာပါမည်။ “ဆက်လုပ်ရန်” ကို နှိပ်ရပါမည်။ MPT က ပေးပို့လိုက်သည့် SMS မှ တစ်ဆင့် ဝင်ရောက်လာသည့် သုံးစွဲသူများအတွက် ယခုအဆင့်မှ စပြီး လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းငွေ ရရှိရန် အကျုံးဝင်သည့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖြည့်သွင်းပေးရန် တောင်းဆိုခံရပါမည်။ (ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းငွေ ရယူရန် အကျုံးမဝင်သည့် သုံးစွဲသူများကို လိုအပ်သလို အသိပေးမည်ဖြစ်ပြီး ရှေ့ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။)
ထို့နောက် ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖြည့်သွင်းပြီး “ဆက်လုပ်ရန်” ဆိုသည်ကို နှိပ်ရပါမည်။
အကျုံးဝင် သည့် ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြည့်လိုက်ပါက ဖုန်းငွေ ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပေးသည် အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် စာမျက်နှာတစ်ခုကိုမြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သတိပြုရန်မှာ MPT ၏ ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မိမိတို့ဖုန်းငွေပြန်လည် ရရှိရန် အကျုံးဝင်ခြင်း ရှိ မရှိ ကို လိုတရတွင် စစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း ဖုန်းငွေမည်သည့်အချိန်တွင် ဖြည့်ပေးမည်ကိုမူရုတ်တရက် စစ်ဆေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ MPT အနေဖြင့် ဖုန်းငွေဖြည့်ပေးပြီးလျင်ပြီးချင်း သက်ဆိုင်သည့်အသုံးပြုသူသို့ စာတို(SMS) ကို ပေးပို့ပြီးနောက် စစ်ဆေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ GSM နှင့် WCDMA အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မိမိတို့ဖုန်းငွေပြန်လည် ရရှိရန် အကျုံးဝင်ခြင်း ရှိ မရှိနှင့် ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းပေးမှုကို အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် လိုတရ ဝက်ဘ် စာမျက်နှာတွင် စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ CDMA အသုံးပြုသူများအတွက်မူ မိမိတို့ဖုန်းငွေပြန်လည် ရရှိရန် အကျုံးဝင်ခြင်း ရှိ မရှိနှင့် ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းပေးမှုကို အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် Call Center နံပါတ် 106 သို့ ဆက်သွယ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
MPT-KSGM Joint Operation ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Koichi Kawase က “MPT ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲသူတွေ စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိဖို့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပထမနဲ့ အမြဲတမ်း ဦးစားပေးကိစ္စပါပဲ။ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်အားပေးမှုနဲ့ ယုံကြည်မှုကို အလွန်ပဲ အလေးထားပါတယ်။ ဒီနေ့အချိန်ထိ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ အားပေးမှုအတွက်လည်း ကျေးဇူးအထူးပဲ တင်ရှိပါတယ်။ ရယူထားခြင်းမရှိတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ဝန်ဆောင်ခပေးခဲ့ရတဲ့ သုံးစွဲသူများအတွက် ဖုန်းငွေပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပေးဖို့ကိုလည်း အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အခု ဖြစ်ရပ်အတွက် သုံးစွဲသူတွေ အဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အပေါ် ကျွန်တော်တို့ MPTအနေနဲ့ အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ အလားတူ ဖြစ်ရပ်မျိုး ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းမရှိအောင်လည်း ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဆောင်ရွက်နေပါပြီ” ဟု ပြောကြားသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 29, 2016 နိုဝင်ဘာ 7, 2016 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
ကျောင်းသားလူငယ်များ၏ ပညာရေးအတွက် MPT နှင့် NLD ပညာရေးကွန်ရက် တို့ ပူးပေါင်းသည့် “ရှေ့သို့လှမ်းချီဒီဂျစ်တယ် ပညာရေးဆီ” အစီအစဉ်စတင်
ရှေ့သို့လှမ်းချီမြန်မာပြည်ဟူသည့် ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီလိုအပ်ချက်ရှိနေသည့် ကျောင်းသားလူငယ်များ၏ပညာရေးစနစ်တွင်နောက်ကျ မကျန်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးMPT နှင့် NLD ပညာရေးကွန်ရက် တို့ပူးပေါင်းကာလူမှုအကျိုးပြုအစီအစဉ်တစ်ခုကိုစတင်လုပ်ဆောင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ လက်ပ်တော့ပ်ကွန်ပျူတာများ၊ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု နှင့် သင်တန်းဆရာများတို့ကိုအထောက်အပံ့ပြုပြီး အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည့် လူငယ်များ၏ အနာဂတ်အောင်မြင်နိုင်ရေးတွင် အရေးပါသည့် ကွန်ပျူတာပညာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများကိုလည်း ပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(ရန်ကုန်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်)– မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်အော်ပရေတာဖြစ်သော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း(MPT)က အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည့် ကျောင်းသားလူငယ်များအတွက် အကျိုးပြု လူမှုရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် “ရှေ့သို့လှမ်းချီဒီဂျစ်တယ်ပညာရေးဆီ” အစီအစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပညာာရေးကွန်ရက်နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နေသည့် ကွန်ပျူတာပညာရေးအစီအစဉ်ကို တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကာ မွန်ပြည်နယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ပညာဒါနကျောင်း (၁၀)ကျောင်း သို့ လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာအလုံး (၂၀၀ )ကိုလှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
နယ်မြို့များ၊ မြို့ပြဆင်ခြေဖုံးဒေသရပ်ကွက်များရှိကျောင်းသားလူငယ်အများစုမှာကွန်ပျူတာနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြေခံအသိပညာများကို စာသင်ကျောင်းများတွင် မသင်ကြားခဲ့ရဘဲယင်း၏ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် အလုပ်အကိုင်ကောင်းများရရှိရန် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးလေ့ရှိကြသည်။ ဥပမာအနေဖြင့် ယနေ့ခေတ် အလုပ်နေရာအများအပြားအတွက် မဖြစ်မနေတတ်မြောက်ထားရမည့် Microsoft Software Package များကိုနားလည်သိရှိထားရမည် ဖြစ်သော်လည်း သင်ယူတတ်မြောက်ထားခြင်း မရှိသည့်အခါ နည်းပညာနှင့် ပိုမိုယဉ်ပါးနေသည့် သက်တူရွယ်တူလူငယ်များနှင့် ယှဉ်ပါကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ လက်လွှတ်ရမည့် အနေအထားတွင် ရှိနေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အနာဂတ် လူငယ်များထံနည်းပညာနှင့် ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများထောက်ပံ့ပေးရန် ရည်ရွယ်သည့် “ရှေ့သို့လှမ်းချီဒီဂျစ်တယ်ပညာရေးဆီ” အစီအစဉ်မှာ မြို့ပြနှင့်အလှမ်းဝေးသည့် နေရာဒေသများမှ လူငယ်လူရွယ်များကိုပါ ပညာရေးတွင် နောက်ကျမကျန်ရစ်ခဲ့စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
လူငယ်များအနေဖြင့် ကွန်ပျူတာပညာရပ်ကိုသင်ကြားရန်အတွက် ရန်ကုန်ကဲ့သို့မြို့ကြီးများဆီတကူးတက လာရောက်သင်ကြားရန် မလိုအပ်တော့ဘဲMPT နှင့် NLD ပညာရေးကွန်ရက် တို့၏ လူမှုအကျိုးပြုအစီအစဉ်ဖြင့် နည်းပညာနှင့် သင်ခန်းစာပို့ချမှုများသည် ၄င်းတို့ထံ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ကျောင်းသားလူငယ်များအနေဖြင့်ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပညာရပ်များလွယ်လင့်တကူသင်ယူနိုင်ရန် NLD ပညာရေးကွန်ရက်က ‘အမေ့အိမ်’ ပညာဒါနကျောင်းများတွင် Computer သင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းများကိုလွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ကတည်းကစတင်ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ရာကျောင်းသားဦးရေ ၇၅၀ ထက်မနည်း သင်တန်းများ ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနိုင်စွမ်းများလည်း တိုးတက်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။သို့ရာတွင် အဆိုပါအစီအစဉ်ပိုမိုပြီး အောင်မြင်နိုင်စေရန်နှင့် လူငယ်လူရွယ်များ၏ စွမ်းရည် တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ပံ့ပိုးမှုများလည်းလိုအပ်နေပါသည်။
ယခုလို MPT ၏ထောက်ပံ့ကူညီမှုဖြင့် NLD ပညာရေးကွန်ရက် ၏ ယခုအစီအစဉ်မှာအခြားသော နေရာဒေသများဆီသို့ ပိုမိုချဲ့ထွင်နိုင်ပြီဖြစ်ကာကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်မှုများကို လူငယ်လူရွယ်များစွာတို့ ပိုမိုပြီးလက်လှမ်းမီ ရရှိနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအတွက် လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာများသာမကWi-Fi ဆက်သွယ်မှုအတွက် ပစ္စည်းပစ္စယများနှင့်ခြောက်လစာ အင်တာနက်ဒေတာများကိုအဆိုပါ ၁၀ နေရာစလုံးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကာ သင်တန်းပို့ချမည့် ဆရာ ၅ ယောက်အတွက် လိုအပ်သည့် ပံ့ပိုးမှုများကို ပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း MPT က ယနေ့ကြေညာလိုက်သည်။
“MPT ဟာမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်မှုမှာ တစ်တပ်တစ်အားပါဝင်နေတဲ့အလျောက် အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသူတွေ၊ အရင်က အကူအညီမရခဲ့သူတွေဆီကို အတတ်ပညာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ပံ့ပိုးပေးခြင်းအားဖြင့် ခေတ်နောက်ကျကျန်ရစ်သူမရှိအောင် ကြိုးစားလျက်ရှိပါတယ်။ MPT မှာ ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်နေတဲ့အထဲမှာ နည်းပညာတိုးတက်စေမှု၊ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေဟာ အဓိကနေရာကပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အခုလို NLD ပညာရေးကွန်ရက် နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ ဒီလူမှုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းဟာအဓိပ္ပါယ်ပြည့် စုံနေပါပြီ” ဟု MPT-KSGM ၏ Chief Executive Officer ဖြစ်သူMr.Takashi Nagashima က ပြောကြားပါသည်။
“လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာအလုံး ၂၀၀ နဲ့ အရေးပါတဲ့ Wi-Fiအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုတွေ၊ ကျွမ်းကျင်မှုရရှိအောင် သင်တန်းပို့ချတာတွေကို တကယ်တမ်းလိုအပ်နေသူတွေဆီ အရောက်ပို့ပေးခြင်းအားဖြင့် မြန်မာလူငယ်လူရွယ်တွေဟာ သူတို့ဒေသကနေခွာစရာမလိုဘဲ မြို့ကြီးပြကြီးက လူငယ်တွေနဲ့ တူညီတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရရှိခံစားနိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့ ဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းကို စလှမ်းနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အမေ့အိမ် အခမဲ့ ပညာဒါနကျောင်းများကို နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ၎င်းနေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ စတင် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းအမေ့အိမ် အခမဲ့ ပညာဒါနကျောင်းပေါင်း(၁၀၄) ကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အခြား ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းများတွင်လည်း ပညာဒါနကျောင်း(၁၀၀) ကျော်ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးစေတနာ့ဝန်ထမ်း ဆရာ၊ ဆရာမပေါင်း ၂,၀၀၀ ကျော်က မူလတန်းမှ အထက်တန်းထိရှိသည့် ကျောင်းသား ၂၀,၀၀၀ ကျော်ကိုလေ့ကျင့် သင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။
ယခုလိုMPT ၏သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ လှူဒါန်းမှုဖြင့် တစ်နှစ်လျှင်အနည်းဆုံး ကျောင်းသားဦးရေ ၆၀၀ ကျော် ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာပညာရပ်များသင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းထားသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပညာရေးကွန်ရက် မှ ကိုုယ်စားပြုပြောဆိုရာ၌ “ကွန်ပျူတာပညာရပ်ပို့ချမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပိုပြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်နိုင်လာတာကို ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ လူငယ်တွေဟာဒီနေ့ ၂၁ ရာစုနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ပညာရေးကိုသင်ယူရဖို့အတွက် နေရာကောင်းကို ကြိုးစားရှာဖွေနေရတာထက် လိုအပ်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေဆီပညာသင်ကြားစရာ ကျောင်းတွေကို အရောက်ပို့ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ MPT က အခုလို လှူဒါန်းလိုက်တာဟာ ပိုမိုများပြားတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ နည်းစနစ်တွေနဲ့ သင်ကြားနိုင်စေပြီး သူတို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်တွေကို ပေးအပ်နိုင်စေလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကျိုးအပြုအစီအစဉ်နဲ့ဆို ကျောင်းသားတွေဟာ လိုအပ်တဲ့သင်ခန်းစာတွေ သင်ယူဖို့အတွက်သင်တန်းတွေဆီကိုသွားရောက်နိုင်ရေး ကိုယ့်နေအိမ်၊ မိသားစုနဲ့ ခွဲခွာစရာမလိုတော့ဘဲ သင်တန်းတွေကသူတို့ဆီကို ရောက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
MPT သည် “ရှေ့သို့လှမ်းချီဒီဂျစ်တယ်ပညာရေးဆီ” အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာများနှင့် တကွ Wi-Fi အင်တာနက်ချိတ်ဆက်သည့် Routerစက်များနှင့် အင်တာနက်ဒေတာအသုံးပြုခွင့်များကိုပါ ပေးအပ် လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင် NLD ပညာရေးကွန်ရက်အနေဖြင့် သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် MPT အနေဖြင့်သင်တန်းပို့ချပေးမည့် ဆရာများအတွက် ပံ့ပိုးမှုများကိုပါ ဆက်လက် ပြုလုပ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အင်းစိန်မြို့နယ်၊ တောင်ဒဂုံ ၇၂ ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နယ်တွင် မြို့မတောင်ရပ်ကွက် နှင့် ဘုရားကုန်ကျေးရွာ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ပုဇွန်တောင် မြို့နယ်၊ ကော့မှူးမြို့နယ်နှင့် သုံးခွမြို့နယ် တို့အပြင်မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့နယ်စသည်တို့ရှိNLD ပညာရေးကွန်ရက်ကျောင်းများသို့ လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 17, 2016 နိုဝင်ဘာ 3, 2016 Categories CSR Activitiesmm, Latest Newsmm, Press Releasesmm
နေပြည်တော် ဇေယျာသီရိမြို့နယ် ပြည်စံအောင် အိတ်ချိန်း နှင့် မန္တလေးအိတ်ချိန်းရှိခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များလဲလှယ်မည်ဖြစ်သဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအားပြောင်းလဲမည်
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ််လ ၈ ရက် – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) က ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေးနှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်ရန် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ ဇေယျာသီရိမြို ့နယ် ပြည်စံအောင် အိတ်ချိန်း နှင့် မန္တလေးမြို့ S-12 အိတ်ချိန်းနယ်မြေအတွင်းတွင် ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မည် ဖြစ််သဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းလဲမည့်နေ့ရက် နှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ Continue reading “ နေပြည်တော် ဇေယျာသီရိမြို့နယ် ပြည်စံအောင် အိတ်ချိန်း နှင့် မန္တလေးအိတ်ချိန်းရှိခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များလဲလှယ်မည်ဖြစ်သဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအားပြောင်းလဲမည်”
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 8, 2016 ဒီဇင်ဘာ 14, 2016 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
နိုင်ငံတကာမှ ထိပ်တန်းအဆိုတော်များ၏ နောက်ဆုံးပေါ်သီချင်းများကို MPT ၏ ခေါ်သူနားဆင် တေးသံစဉ် ဝန်ဆောင်မှု (CRBT) တွင် ရယူနိုင်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁ ရက်) – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သော MPT သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Mobimedia International နှင့် ပူးပေါင်းပြီး MPT ၏ ခေါ်သူနားဆင် တေးသံစဉ် ဝန်ဆောင်မှု (CRBT) တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ လူကြိုက်များသည့် တေးသီချင်းများကို ရယူနိုင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ယနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
MPT ၏ သန်း ၂၀ သော သုံးစွဲသူမိဘပြည်သူများ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်အားပေးခဲ့မှုအပေါ် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သော အားဖြင့် အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ မိမိနှစ်သက်ရာ သီချင်းအား ခေါ်ဆိုသူများမှ မိမိထံသို့ ခေါ်ဆိုနေစဉ်အတွင်းတွင် ကြားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှု (CRBT) အတွက် Taylor Swift ၊ Justin Bieber အစရှိသည့် နိုင်ငံတကာမှ နာမည်ကြီးအဆိုတော်များ၏ နောက်ဆုံးပေါ်တေးသီချင်းများကို ရွေးချယ် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
MPT ၏ GSM နှင့် WCDMA အသုံးပြုသူများသည် အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုအတွက် Daily plan ၊ Monthly plan ဟူ၍ ရွေးချယ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ Daily plan အတွက် တစ်ရက်လျှင် ၄၇ ကျပ်သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ၇၉၇၉ သို့ REG D ဟူ၍ စာတိုပေးပို့ကာ ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Monthly plan အတွက် တစ်လလျှင် ၁,၀၅၀ ကျပ်ဖြင့် ၇၉၇၉ သို့ REG M ဟူ၍ စာတိုပေးပို့ကာ မိမိနှစ်သက်ရာ တေးသီချင်းများကို မိမိဖုန်းတေးသံစဉ်အဖြစ် ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရာတွင် daily plan နှင့် monthly plan အတွက် နေ့စဉ်ကြေး၊ လစဉ်ကြေး တို့အပြင် သီချင်းတစ်ပုဒ်လျှင် ၃၁၅ ကျပ်ဖြည့်သွင်းရမည် ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ သီချင်းဝယ်ယူမှုသည် လကုန်သည်အထိ ရရှိ အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ကာ သီချင်းကို ဆက်လက် ဝယ်ယူလိုပါက လစဉ် ဖြည့်သွင်းပေးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်ကြေးဖြင့် ခေါ်သူနားဆင် တေးသံစဉ် ဝန်ဆောင်မှုသည် မိမိရယူသည့်နေ့၏ ည ၁၂ နာရီ တွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
“MPT ရဲ့ အမြဲသုံးစွဲသူမိဘပြည်သူများကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ပြည်တွင်းမှသာမက နိုင်ငံတကာမှ အကြောင်းအရာများနဲ့ ဆန်းသစ်ထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများကို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ MPT ကွန်ရက်များအားလုံးမှာ ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်ဖို့ အမြဲရှေးရှုလျက်ရှိပါတယ်။ အခုဆိုရင် CRBT ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူပြီး နိုင်ငံတကာမှ နာမည်ကြီးတေးသီချင်းများကို ဖုန်းခေါ်ဆိုသံအဖြစ် နားထောင်နိုင်ပြီဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂီတဝါသနာအိုးများ အတွက် ပိုအဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု MPT-KSGM Joint Operation မှ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Koichi Kawase က ဆိုသည်။
Mobimedia International သည် Universal Music အုပ်စု၏ တေးသီချင်းများကို ရယူခွင့်လိုင်စင် တစ်ဦးတည်းသီးသန့် ရရှိထားသည့်အတွက် နိုင်ငံတကာမှ တေးသီချင်းအမျိုးမျိုးကို MPT သုံးစွဲသူများထံ အရောက်ယူဆောင်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ “MPT နဲ့ ခုလိုပူးပေါင်းပြီး နိုင်ငံတကာမှ တေးသီချင်း အမြောက်အများကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် တကယ့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်” ဟု Mobimedia International ၏ CEO ဖြစ်သူ David van Herwaarde က ပြောကြားခဲ့သည်။
“အခုလို ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုနဲ့ အခြားဆန်းသစ်တဲ့ ဂီတထုတ်ကုန်များက တစ်ဆင့် မြန်မာ့ ဂီတပရိသတ်များဆီကို Mobimedia ရဲ့ တေးသီချင်းများဝန်ဆောင်မှု ပေးလာတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမ ဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကြီးထွားလာတဲ့စျေးကွက်ကို သိရှိပြီး အလေးပေးတတ်တဲ့ Mobimedia က ကျွန်တော်တို့အတွက် စံထားရမယ့် မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မလေးရှားနှင့် စင်္ကာပူ၏ Universal Music Group MD Kenny Ong က မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။
ခေါ်သူနားဆင် တေးသံစဉ် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အပတ်စဉ် သီချင်းအပုဒ်ရေ ၂၅၀ ထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာမှ လူကြိုက်အများဆုံး တေးသီချင်းဇယားများမှလည်း နှစ်သက်ရာတေးသီချင်းများကို ရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Maroon5၊ Demi Lovato ၊ Rihanna ၊5Seconds of Summer ၊ Ariana Grande ၊ Avicii ၊ Ellie Goulding ၊ Drake ၊ Selena Gomez တို့နှင့် အခြားသောနာမည်ကြီးအဆိုတော်များ ၏ တေးသီချင်းများကို MPT ၏ “LoTaYa” Web portal CRBT http://lotayamm.com/service/crbt/MPTRingTune.
အသုံးပြုသူများသည် CRBT ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူပြီးသည်နှင့် CRBT စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် နှစ်သက် ရာသီချင်း၏ ကုဒ်နံပါတ် ၁၀ လုံးကို BUY နှင့်တစ်ကွ ပူးတွဲရေးသားပြီး ၇၉၇၉ သို့ စာတိုပေးပို့ခြင်းဖြင့် ဖုန်းတေးသံစဉ်ကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ – Calvin Harris နှင့် Rihanna တို့၏ This is What You Came For သီချင်းကို ရယူလိုပါက ၇၉၇၉ သို့ BUY 0000087207 ဟူ၍ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဒေါင်းလုတ်ရယူထားသည့် သီချင်းများအတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွင် ၅% ပါဝင်ပြီးဖြစ်သည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 1, 2016 နိုဝင်ဘာ 7, 2016 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm